आखिर वनमन्त्री आले कि भए बर्खास्त ? यस्तो छ कारण । - News20 Media
June 5, 2021 N20LeaveaComment on आखिर वनमन्त्री आले कि भए बर्खास्त ? यस्तो छ कारण ।
जेठ २२, काठमाण्डौ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वनमन्त्री प्रेम आलेसहित तीन मन्त्री हटाएका छन् । ओलीले भूमीसुधार मन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाम्फे, वनमन्त्री प्रेम आले र महिला मन्त्री जुली महतोलाई हटाएका हुन् ।
उनीहरुको ठाँउमा महन्थ पक्षका नेतालाई मन्त्री बनाउन तीन मन्त्री हटाइएको हो । भुमीसुधारमा लक्ष्मणलाल कर्ण, बनमा एकबाल मियाँ तथा महिला मन्त्रीमा चन्दा चौधरीलाई नियुक्त गरिएको छ । महन्थ पक्षका ८ नेतालाई मन्त्री तथा दुईलाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव राखेका छन् ।
निवर्तमान सहरीविकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेर सरकारमा सहभागी हुनको लागि प्रस्ताव राखेको जानकारी दिए । अहिले प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच पानी वारावारको सम्बन्ध छ ।
दाहाल ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट जसरी पनि विस्थापित गर्न लागिपरेका छन् । यसको लागि दाहालले कांग्रेस, नेकपा (एमाले) को माधव कुमार नेपाल समूह, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र जनमोर्चासँग मोर्चा कसेका छन् ।
बालबालिकालाई घरभित्र यसरी खुसी राख्न सकिन्छ, समय मिलाएर पढ्नुहोस्
ओलिलाई विश्वासको मत लिन कडा चुनौती। रातारात सांसदको किनबेच शुरु।।